Beerta cadceeda ee bulshada u roon ee u roon-roon ee Minnesota | Dhibcaha: Shaybaadhka Tamarta Cusboonaysiinta Qaranka
Mu'asasada McKnight ayaa maanta ka go'an inay ka gaarto qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo oo dhan $3 bilyan oo deeq ah marka la gaaro 2050. McKnight, oo ah hormuudka maalgeliya xalalka cimilada ee Galbeedka -Dhexe, ayaa ah aasaaska ugu weyn ee gaarka loo leeyahay ee dalka si loo raadsado hibo eber eber ah.
Tallaabadani waxay ku soo beegmaysaa toddobaadyo uun ka hor Shirka Isbeddelka Cimilada ee Qaramada Midoobey ee Glasgow, xilli dadka adduunka oo dhami ay marka hore la kulmayaan saamaynta ba’an ee isbeddelka cimilada. Ballan -qaadku wuxuu la jaanqaadayaa yoolka Heshiiskii Paris ee ahaa in kuleylka adduunka lagu xaddido 1.5 ° C illaa 2 ° C.
eber saafiga ah waa istaraatiijiyad dhamaystiran oo isla markaaba loo dhimo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee dhamaan faylalka maalgashiga - oo ay ku jiraan qaybta shidaalka -iyado sidoo kale samaynta maalgashi cusub si loo dhiso dhaqaale ka madax banaan kaarboon. Habkan adag waxa uu u baahan yahay in la baaro gees kasta oo ka mid ah deeqaha qiiqa sii daaya, joojinta maalgelinta soo-saareyaasha sare, sida maalgelinta shidaalka fosilka ee hadhay, la shaqaynta in ka badan 75 maareeyayaasha maalgelinta si ay u nadiifiyaan hantidooda, iyo si joogto ah ula xidhiidhida horumarkayaga.
Sanduuqa David Rockefeller iyo machadyada tacliinta sida Harvard iyo Jaamacadda Michigan iyo lacagaha hawlgabka sida CalSTRS iyo CalPERS waxay sameeyeen ballanqaadyo la mid ah sannadkii iyo badhkii u dambeeyay.
“Baaxadda dhibaatada cimiladu waxay u baahan tahay inaan qaadno tallaabo geesinimo leh oo ula kac ah. Aasaasayaashu waxay dul fadhiyaan in ka badan tirilyan doollar oo ah xalalka cimilada ee suurtagalka ah, waxaanan ku martiqaadnaa kuwa kale inay nagu soo biiraan. ”
—TONYA ALLEN, MADAXWEYNE
“Baaxadda dhibaatada cimiladu waxay u baahan tahay inaan qaadno tallaabo geesinimo leh oo ula kac ah,” ayay tiri Tonya Allen, oo ah madaxweynaha Foundation McKnight. “Tirtiridda saamaynta gaaska aqalka dhirta ee awoodeena ayaa noo oggolaanaysa inaan shaqaaleyno dhammaan ilaha Aasaaskayaga si wax looga qabto isbeddelka cimilada. Aasaasayaashu waxay dul fadhiyaan in ka badan tirilyan doollar oo ah xalalka cimilada ee suurtagalka ah, waxaanan ku martiqaadnaa kuwa kale inay nagu soo biiraan. ”
Xaaladda McKnight, in ka badan 40% ee $3 bilyan ee hibeynta ayaa leh is -waafajin hawlgal, iyo saamaynta maalgelinta aan la furin, iyadoo $500 milyan ay ka go'an tahay dadweynaha iyo kuwa gaarka ah saameeyaan maalgelinta kuwaas oo bixiya fikradaha, teknolojiyadda, softiweerka, iyo adeegyada si loo baabi'iyo dhaqaalaha.
Ted Staryk, oo muddo dheer xubin ka ahaa guddiga McKnight ahna guddoomiyaha Guddiga Maalgashiga Hawlgalkiisa "Kani waa waayo -aragnimada nagu hagi doonta waddada eber -ka."
Si loo gaaro eber saafi ah, McKnight wuxuu si buuxda uga faa'iideysan doonaa fursaddiisa mulkiilaha hantida, macaamilka shirkadaha adeegyada maaliyadeed, saamilayda, iyo kaqaybgalaha suuqa ee qorshe afar qaybood ah:
Deji bartilmaameedyada: Ka go'an hibada eber ee saafiga ah sannadka 2050 ama ka hor. Ku sawir khariidada waddada eber adiga oo dejinaya bartilmaameedyo ku -meelgaar ah oo horumar ah marka la gaaro 2030.
Maalgelinta xalalka: Sii wad inaad ka faa'iidaysato maalgashiyada ka faa'iideysanaya kala -guurka cimilada, oo raadi fursado si aad u waddo maareynta khatarta cimilada iyo dhimista gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyada oo loo marayo maalgashiyada caadiga ah ee jira.
Ka qaybgal dhiggeeda: La shaqee la -taliyeyaasha maalgashiga si aad u fahanto qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee maareeye kasta oo maaliyadeed. La shaqee milkiilayaasha hantida iyo khubarada si loo aqoonsado xogta iyo ikhtiyaarada xisaabinta kaarboonka si loo aamino qiimaynta qiiqa hibada. La shaqee shirkadaha dadweynaha ee aan leenahay si aan u hubinno inay dejinayaan bartilmaameedyo lagu yareynayo gaaska aqalka dhirta lagu koriyo oo loo jiheeyo xeelado faa'iido leh.
Xiriir horumarka: Samee warbixinno joogto ah oo ku saabsan horumarka iyo ballanqaad inaad la wadaagto waayo -aragnimada asxaabta.
Beerta dabaysha ee Minnesota waxay siisaa tamar iyo dakhli nadiif ah dawladaha hoose iyo beeralayda | Credit: Awoodda Minnesota
Roger Sit, oo xubin ka ah guddiga iyo guddoomiyaha guddiga maalgashiga McKnight . "Waxaan ku kalsoonahay inaan ku guuleysan karno eber saafi ah oo saameyn togan ku leh meeraha iyo faylalkayaga."
Sannadkii 2015, McKnight wuxuu ka mid ahaa boqollaal maal -gashadeyaal oo ku baaqaya heshiis hami leh oo horseed u ah COP21 ee Paris. Tan iyo markaas McKnight wuxuu si ballaaran u ballaariyay maalgashiyadiisa saamaynta wuxuuna labanlaabay bixinta deeqda cimilada la xiriirta. Eber saafi ah ayaa weli ah daqiiqad kale oo aasaaska u horseedi karo tusaale ahaan.
"Markaan ku dhownahay COP26 ee Glasgow, waxaan ugu baaqeynaa dhammaan maalgashadayaasha hay'adaha inay nagu soo biiraan si geesinimo leh kulankan muhiimka ah ee isbeddelka cimilada," ayay tiri Elizabeth McGeveran, oo ah agaasimaha maalgashiga McKnight Foundation. "Saynisku wuxuu ku cad yahay dhaqaalaha ay tahay inaan abuurno si aan u hormarno, oo doolar kasta oo hibo leh wuxuu bixiyaa fursado degdeg ah oo awood leh si wadajir loogu horumariyo mustaqbalka kaarboon hooseeya."
Eeg dhammaan maalgashiyada saamaynta leh
Ballanqaadkayaga eber ee saafiga ah wuxuu ku dhismaa Diiwaanka Raadka La Xaqiijiyay ee Maalgelinta Cimilada
2014: Waxaa la bilaabay barnaamijka maalgelinta saamaynta leh 10% oo deeq ah oo loo qoondeeyay maalgelinta saamaynta sare leh, iyo dhuxusha laga iibiyay faylalka dakhliga go'an. Iyada oo la adeegsanayo $100 milyan oo maalgashi, ayaa lagu abuuray sanduuqa Istaraatiijiyada Waxtarka Kaarboonka Mellon Capital Management.
2015: Ku biirtay Cimilada 100+ ee leh hawada sare ee aduunka ugu wayn si loo dejiyo bartilmaameedyo gardaro ah.
2021: In ka badan 40% ee deeqaha ayaa leh isku toosin hadaf.
Akhri eberkeena saafiga ah FAQ
Dan Thiede, Sarkaalka Sare ee Isgaarsiinta, dthiede@mcknight.org iyo 612-336-3731
Sare joogto ah, Waxqabadka aan caadiga ahayn
By Elizabeth McGeveran Oktoobar 2017